Toamasina: ampiasaina koa ny herinaratra avy amin’ny masoandro | NewsMada
Toamasina: ampiasaina koa ny herinaratra avy amin’ny masoandro
Par Taratra sur 25/01/2021
Manamafy ny filoham-pirenena amin’ny hanomezana tolotra herinaratra zakan’ny fahefa-mividin’ny isan-tokantrano malagasy. Tafiditra ao anatin’izany ny hampidinana ny sarany, ary fomba iray hanatrarana azy ny fampiasana ny angovo azo havaozina, toy ny avy amin’ny masoandro, ohatra.
Fanamby napetraky ny filoha Rajoelina ny hahazoan’ny 50%-n’ny mponina misitraka herinaratra avy amin’ny angovo azo havaozina. Miditra amin’ny fanatanterahana izany izy, ankehitriny. Notokanany, omaly, 24 janoary, ny toby mamokatra herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro, any Tanambao Verrerie Toamasina. Miisa 5.580 ny takelaka misintona ny herin’ny masoandro tafapetraka, manana tanjaka 2 MW, efa mifandray amin’ny tambajotran’ny Jirama, hamatsy herinaratra ho an’ny tokantrano miisa 3.000 ao an- tampon-tanànan’i Toamasina. Efa nanomboka ny volana aogositra 2020 teo no niasa ity famatsiana vaovao ity.
Hahatratra 20 MW ny tanjaky ny herinaratra hovokarin’ity toby vaovao any Toamasina ity, ho vita amin’ny taona 2023. Ho afaka hamatsy tokantrano miisa 30.000 hisahana an’i Toamasina I sy II.
Hampidinina ny vidin’ny herinaratra
Araka ny toky sady fanambin’ny filoha Rajoelina, tafiditra ao anatin’ny paikady hampidinana ny saran’ny herinaratra ny fampiasana ny angovo azo havaozina, toy izao atao any Toamasina izao. Nohamafisiny tany Toamasina izany toromarika ho an’ny Jirama izany, hanatanterahana ny fampidinana ny saran’ny herin-jiro. Tsiahivina fa nomen’ny fanjakana foibe fe-potoana 48 ora ny Jirama, hamaha haingana ny fitarainan’ny mpanjifa, tratran’ny fiakaran’ny saran-jiro, amin’ilay fepetra vaovao famerana ny vidiny, Optima.
“Mila tsinjovina ny fehefa-mividin’ny vahoaka. Herinaratra ho an’ny rehetra amin’ny vidiny mirary no tanjona”, hoy ny filoha Rajoelina Andry.